ရွေှ့ဟင်္သာသတင်းဌာန. ၈ရက်နေ့ မေလ ၂၀၁၃ —- မြန်မာနိုင်ငံ အခြေစိုက် တရုတ် သံရုံးက တရုတ် နုိုင်ငံ ကနေ မြန်မာ နိုင်ငံထဲကို စစ်လက်နက်တွေ သယ်ပို့ ပြောင်းရွေ့ခဲ့တဲ့ သတင်းတွေဟာ မှန်ကန်မှု မရှိဘူး ဆိုပြီး သတင်း ထုတ်ပြန် ခဲ့ပါတယ်။
ရွှေဟင်္သာသတင်းဌာန. ၈ရက်နေ့ မေလ ၂၀၁၃ —- ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် KIA နှင့် အစိုးရ တပ်ဖွဲ့ များသည် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွား လာနေကြောင်း KIO နိုင်ငံခြားရေး ဒုတိယ တာဝန်ခံ ဂျိန်းလွန်းတောင်က ဆိုပါသည်။
RFA News, 8May 2013 —- လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း လုံးဝဖျက်သိမ်းပေးဖို့အတွက် ဒေသခံပြည်သူ ၄၀၀ ကျော်ဟာ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ဆားလင်းကြီး မြို့နယ် တုံရွာထိပ်ကနေ ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီရှိရာ ညောင် ပင်ကြီး စက်လှေဆိပ်အထိ ဒီကနေ့နေ့လည်ပိုင်းက ချီတက်လမ်းလျှောက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
(၄၀၁ အပိုဒ်/၁) နှောင်ကြိုးတည်းခံများကိစ္စ
နေ့သစ် Renaissance , 8May 2013 —- ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ကြံ့/ဖွံ့ အာဏာလက်လွှဲယူပြီးတဲ့နောက် နိုင်/ကျဉ်းတချို့ကို စလွှတ်တော့ နှောင်ကြိုးတန်းလန်းကြီးနဲ့ဆိုပြီး ပြောသူတွေထဲမှာ ကျနော်လည်းပါပါတယ်။ (၄၀၁- အပိုဒ် ၁) ဆိုတာဘာလဲဆိုပြီး ဆောင်းပါး ၂ ပုဒ်လောက်တောင် ရေးဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ခု အများနားလည်ရပိုလွယ်အောင် အရပ်သားစကားနဲ့ အတိုဆုံးချုပ်ပြီးပြန်ပြောချင်ပါတယ်။ ခု အဲ့သဘောဆောင်တဲ့ ပူပူနွေးနွေးကိစ္စတခုဖြစ်တယ်မြင်လို့ပါ။
ချင်းမိုင်(မဇ္စျိမ) . ၈ရက်နေ့ မေလ ၂၀၁၃ — ဦးနေမျိုးဇင် အား ထောင်ဒဏ် ၆ နှစ် ပြန်လည် ချမှတ်လိုက်ခြင်းမှာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ဟောင်းများအား ခြိမ်းခြောက်မှု ဖြစ်ကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေစိုက် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ကူညီ စောင့်ရှောင်ရေးအသင်း (AAPP)က ယနေ့ ပြောဆိုလိုက်သည်။
၈၈ မျိုးဆက် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း ဟိုပန်ခရီးစဉ် ဆိုင်းငံ့
DVB News, 8May 2013 —- ၈၈ မျိုးဆက် ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ဟိုပန်မြို့ကို သွားရောက်မယ့် မေ ၇ ရက်နေ့ခရီးစဉ်အတွင်း လူတချို့ဟာ ဆိုင်းဘုတ်တွေ ကိုင်ဆောင်ဆန္ဒပြပီး ရုန်းရင်းဆန်ခတ် အခြေအနေ ဖန်တီးဖို့ရှိကြောင်း သတင်းရတဲ့အတွက် ခရီးစဉ်ကို ဆိုင်းငံ့လိုက်ပါတယ်။ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန် — http://burmese.dvb.no/archives/39210
မြန်မာ အဖွဲ့ ဗြိတိသျှ ပညာရေး လေ့လာ
BBC News, 8May 2013 —- မြန်မာ့ အဆင့်မြင့် ပညာရေး တိုးတက် ကောင်းမွန် လာဖို့ ဗြိတိသျှ ကောင်စီ အစီအစဉ် နဲ့ ဒုတိယ ပညာရေး ဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးမြင့် ရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ နည်းပညာ ပညာရှင်တွေ ပါဝင်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ ဗြိတိန်မှာ လာရောက် လေ့လာ နေပါတယ်။
ဝန်ကြီး ဌာန တချို့က အရာရှိကြီးတွေ ဖယ်ရှား ခံရ
BBC News, 8May 2013 —- သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က သူ့ရဲ့ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး မူဝါဒ တွေကို မလိုက်နာ နိုင်တဲ့ သူတွေကို ချန်ထား ခဲ့မယ်လို့ ပြောခဲ့ ပြီးတဲ့နောက် အခု နောက်ဆုံး ထွက်လာတဲ့ နိုင်ငံတော် ပြန်တမ်းမှာ အဆင့်မြင့် အရာရှိကြီး တစ်ယောက်ကို ရာထူးက ထုတ်ပစ် လိုက်ပြီး၊ နောက်ထပ် အရာရှိကြီး အတော် များများ ကိုလည်း အငြိမ်းစား ပေးလိုက်တာ တွေ့ရ ပါတယ်။
ညွန့်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့ရန် NLD သဘောထား ချမှတ်ထားခြင်း မရှိ
RFA News, 8May 2013 —- အမျိုသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးက လာမယ့် ၂ဝ၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မိမိတို့ပါတီက အမတ်နေရာအများစုနိုင်ခြေရှိပြီး ညွန့်ပေါင်းအစိုးရကို ဖွဲ့စည်းမယ့်သဘော ရှိတယ်လို့ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက မြစ်ကြီးနားမှာပြောကြားခဲ့တာ ဟာ အဲဒီ ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ သဘောထားအမြင်မျှသာ ဖြစ်ပါတယ်လို့ NLD ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က RFA ကိုပြောပါတယ်။
တရုတ် ကွန်မြူနစ် ပါတီက NLD ကို ဖိတ်ကြား
BBC News, 8May 2013 —- တရုတ် ကွန်မြူနစ် ပါတီရဲ့ ဖိတ်ကြားချက် အရ NLD အန်အယ်လ်ဒီ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပါတီဝင် တွေ ဗုဒ္ဓဟူး နေ့က တရုတ် နိုင်ငံကို ထွက်ခွာ သွားခဲ့ကြ ပါတယ်။
RFA News, 8May 2013 —- အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် ၁၂ ဦးဟာ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ အကြီးအကဲတွေနဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ ဒီကနေ့နေ့လည်ပိုင်းက တရုတ်နိုင်ငံကို ထွက်ခွာသွားပါတယ်။
RFA News, 8May 2013 —- ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေတစ်ခု ကို ပြင်ဆင်ပြဌာန်းမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုအခြေခံကျတဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သလဲဆိုတဲ့ သုံးရက်ကြာ ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကို ရန်ကုန်မြို့ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းက Micasa ဟိုတယ်မှာ ဒီနေ့စတင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
DVB News, 8May 2013 —- သြစတြေးလျနိုင်ငံက လွှတ်တော်အမတ်တွေ ပညာရှင်တွေနဲ့ မြန်မာလွှတ်တော်အမတ်တွေ နိုင်ငံရေးပါတီတွေက ကိုယ်စားလှယ်တွေ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးပွဲဟာ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ ရှေ့နေဦးကိုနီက ပြောပါတယ်။
စစ်အာဏာ ချိုးအထပ်ထပ် မျိုးပြတ်အောင် ခွာကြမယ် နွှာကြတယ်
Moe MaKa News, 8May 2013 —- ကျုပ်တစ်ကောင် အသက်ခေါင်မိုးကပ်လာတော့ ဝဋ်နာ၊ ကံနာ၊ သံသရာနာတွေ တိုးလာသဗျာ။ ကိလေသာမကုန်သေးတော့ မသေမချင်း ကိလေသာ နှိပ်စက်ခြင်းကို ခံရတော့မှာပေါ့လေ။ သေခါနီးလေ ပိုဆိုးလေတောင်ဖြစ်လာသေး။
“ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်မှာ လူတွေက မဲတောင်မပေးတတ်သေးဘူး”
Popular News Journal, 8May 2013 —- PR စနစ်ကို ပြတ်ပြတ်သားသား ပယ်ချလိုက်သော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်နာယက ဦးဝင်းတင်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း
နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အန်အယ်လ်ဒီ ပညာရေးကွန်ရက် ညီလာခံ ကျင်းပမည်
DVB News, 8May 2013 —- အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပညာရေးကွန်ရက်က မကြာခင်ကျင်းပမယ့် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ပညာရေးကွန်ရက် ညီလာခံမှာ မြန်မာ့ပညာရေးကိစ္စကို အကျယ်တဝင့်ဆွေးနွေးပြီး လွှတ်တော်ကို တင်ပြမယ်လို့ ကွန်ယက်တာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောပါတယ်။
အကြမ်းဖက် ပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး တရားရုံးများတွင် ပြစ်ဒဏ်စီရင်
DVB News, 8May 2013 —- မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဖြစ်ပွားနေတဲ့ အကြမ်းဖက် ပဋိပက္ခတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပါဝင်တဲ့သူတွေကို တရားရုံးတွေက ပြစ်ဒဏ်စီရင်နေပါတယ်။
VOA News, 8May 2013 —- ပြီးခဲ့တဲ့လထဲ လူအသေအပျောက်တွေ ရှိခဲ့တဲ့အထိ် အကြမ်းဖက်မှုတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဥက္ကံမြို့မှာ ဆူပူလှုပ်ရှားသူ ၁၇ ဦးကျော်ကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ ကျန် ၈ ဦးကိုတော့ ပြန်လွှတ်ပေးထားတယ်လို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးက အဆင့်မြင့် ရဲအရာရှိကြီးတစ်ဦးက ပြော ပါတယ်။ ဒေသဆိုင်ရာ အခြေအနေ တည်ငြိမ်နေပေမဲ့ ပုဒ်မ ၁၈၈ ထုတ်ပြန်ထားသေးတဲ့အတွက် ဒေသခံတွေ ရောင်း ၀ယ်ဖောက်ကားမှုတွေတော့ အဆင်မပြေဘူးလို့ ဥက္ကံမြို့ အနီးအနားနေသူတွေ က ပြောပါတယ်။ အပြည့်အစုံကိုတော့ ရန်ကုန်အခြေစိုက် ဗွီအိုအေ (မြန်မာပိုင်း) အစီအစဉ်သတင်းထောက် ကိုအောင်ရဲမောင်မောင် က သတင်းပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။
အင်ဒိုနီးရှားရဲနှင့် မြန်မာသံရုံးဗုံးခွဲမည်ဟု သံသယရှိသူတို့ ပစ်ခတ်မှုဖြစ်
DVB News, 8May 2013 — အင်ဒိုနီးရှား အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေးရဲတပ်ဖွဲ့ဟာ မြန်မာသံရုံးကို ဗုံးခွဲဖို့ ကြံစည်တဲ့ကိစ္စမှာ ပတ်သက်ကောင်းပတ်သက်နိုင်တယ်လို့ သံသယဖြစ်ခံရတဲ့ လူ ၄ ဦးနဲ့ အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြတယ်လို့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဘန်ဒေါင်း (BANDUNG) က လာတဲ့ အေအက်ဖ်ပီ သတင်းမှာ ရေးပါတယ်။
မန်ယူနည်းပြကီး ဖာဂူဆန် အနားယူပြီ
DVB News, 8May 2013 —- မန်ချက်စတာ ယူနိူက်တက်အသင်းရဲ့ သက်တော်ရှည် နည်းပြကြီး ဆာ အဲလက် ဖာဂူ ဆန်က ဒီနှစ်ဘောလုံးရာသီအကုန်မှာ နည်းပြဘ၀ကနေ အနားယူတော့မယ်လို့ ကြေညာ လုိုက်ပါတယ်။
မန်ယူနည်းပြ ဖာဂူဆန် အနားယူတော့မယ်
BBC News, 8May 2013 — အင်္ဂလန် ပရီးမီးယားလိဂ် ပြိုင်ပွဲရဲ့ ပူပူနွေးနွေ ချန်ပီယံ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းက နည်းပြ ဆာ အဲလ်လက်စ် ဖာဂူဆန်ဟာ အခု ဘောလုံးရာသီ အကုန်မှာ အနားယူတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
VOA News, 8May 2013 —- အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပါအ၀င် ကမ္ဘာပေါ်က တိုင်းပြည်အတော်များများ မှာ မွေးကင်းစကလေး ကျန်းမာရေးဟာ အတော်ကြီးကို အန္တရာယ်ကြီးတဲ့ အနေအထားမှာ ရှိနေတယ်လို့ နိုင်ငံတကာ အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ တဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Save the Children အဖွဲ့ရဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြပါတယ်။ အင်္ဂါနေ့တုန်းက မိခင်များဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကို Save the Children အဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။
အမေရိကန်မှာ ၁၀ နှစ်နီးပါး ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ အမျိုးသမီး ၃ ဦးကိုပြန်တွေ့
BBC News, 7May 2013 —- အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု Ohio ပြည်နယ်မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ် နီးပါးက သီးခြားစီ ပျောက်ဆုံး သွား ခဲ့တဲ့ အမျိုး သမီး ၃ ဦးကို Cleveland မြို့မှာ အသက်ရှင် လျက် ပြန်တွေ့ ရှိခဲ့ ပါတယ်။
«12345678910111213141516...220» English Version